हृदयघातको जोखिमबाट बच्न गोलभेडाको जुस – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Health/हृदयघातको जोखिमबाट बच्न गोलभेडाको जुस
गोलभेडा सबैको भान्सामा प्रयोग हुने तरकारी हो । नेपालमा पनि तरकारी, दालमा गोलभेडाको प्रयोग गरिन्छ भने बेग्लै अचार बनाएर खाने गरिन्छ ।
यो स्वास्थ्यका लागि पनि उपयोगी हुन्छ । तरकारीलाई ग्रेबी बनाउन परिकारमा तिखो स्वाद ल्याउन गोलभेडाको प्रयोग गरिन्छ । टोम्याटो सस त तपाईंले पनि खुब खानुभएको होला, तर के तपाईंले टोम्याटो जुस पिउनुभएको छ ?
रसिला गोलभेडाको जुस शरीरका लागि ज्यादै लाभदायक हुन्छ । पछिल्लो समय गरिएको एक अध्ययनले गोलभेडाको जुस पिउनाले हृदयाघातको जोखिम कम हुने बताएको छ । यो अनुसन्धान ‘जर्नल अफ फुड साइन्स एन्ड न्युट्रिसन’मा छापिएको छ ।
बिना नुन पिउनुहोस् गोलभेडाको जुस
यदि तपाईं दैनिक १ कप बिनानुन गोलभेडाको जुस पिउनुहुन्छ भने तपाईंलाई हृदयाघात हुने खतरा कम हुन्छ । वास्तवमा गोलभेडाको जुसले उच्च रक्तचाप र उच्च कोलेस्टेरोलको समस्यालाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । यी दुवै समस्याले व्यक्तिको मुटुलाई प्रभावित गर्छन् र हृदयाघातका प्रमुख कारण बन्छन् ।
कसरी गरिएको थियो अनुसन्धान ?
जापानस्थित टोकियो मेडिकल एन्ड डेन्टल युनिभर्सिटीमा भएको यो अनुसन्धानमा करिब ५०० मानिसलाई सहभागी गराइएको थियो, जसमा १८४ जना पुरुष र २९७ जना महिला थिए ।
अनुसन्धानका क्रममा दैनिक गोलभेडाको जुस पिएका कारणले उच्च रक्तचापले पीडित ९४ जनाको रक्तचापमा कमी आएको थियो । यिनीहरूको सिस्टोलिक ब्लडप्रेसर १४१.२ बाट १३७ एमएमएचजी र डाइस्टोलिक ब्लडप्रेसर ८३.३ बाट ८०.९ मा झरेको थियो ।
यसका अलावा १२५ जनामा बढेको ब्याड कोलेस्टेरोल (एलडिएल)को स्तर १५५ बाट घटेर १४९.९ एमजी/डिएलमा झरेको थियो ।
महिला र पुरुष दुवैका लागि लाभदायक
अनुसन्धानमा गोलभेडाको जुस महिला र पुरुष दुवैका लागि फाइदाजनक रहेको पाइएको थियो । त्यसैले जोसुकैले यसको सेवन गर्न सक्ने अनुसन्धाताहरूले बताएका छन् ।
यदि तपाईं जुन पिउनुहुन्न भने पनि दैनिक भोजनमा गोलभेडालाई अवश्य सामेल गर्नुहोस् । सलादमा काँचो गोलभेडा खानुहोस् । यसका अलावा तरकारीलाई ग्रेबी बनाउन गोलभेडाको प्रयोग गर्नुहोस् ।
तर, ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने टोम्याटो सस र टोम्याटो केचअपमा धेरै मात्रामा चिनी तथा केमिकल मिलाइएका हुन्छन्, त्यसैले यिनको सेवन तपाईंको स्वास्थ्यका लागि लाभकारी छैन ।
केही अन्य रोगमा पनि लाभदायक छ गोलभेडाको जुस
उल्लेखित आवस्थाका अलावा अन्य कतिपय रोगमा पनि गोलभेडाको जुस लाभकारी पाइएको छ । गोलभेडामा भरपूर मात्रामा फाइबर हुन्छ । यसका अतिरिक्त गोलभेडामा एउटा खास तत्व हुन्छ, जसलाई ‘नियासिन’ भनिन्छ ।
नियासिनयुक्त आहार मुटुका लागि ज्यादै स्वस्थकर मानिन्छ, किनकि, यसले कोलेस्टेरोल घटाउँछ । यसका अलावा गोलभेडामा पर्याप्त एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, जसमा बिटाक्यारोटिन, लाइकोपिन र साइटोन्युट्रियन्ट प्रमुख हुन् । यी एन्टिअक्सिडेन्टले क्यान्सर तथा हृदयाघातबाट बचाउन मद्दत गर्छन् ।
ढिडो ,रोटी पोलेर,उसिने जसरी खाँदा पनि मकैले गर्छ यस्तो फाइदा